တရားခံဖမ်းဆီးစဉ် အော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီး ကြိမ်းမောင်းရိုက်နှက်ခဲ့သော အမျိုးသမီး(၂)ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အမှုဖွင့်အရေးယူ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / တရားခံဖမ်းဆီးစဉ် အော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီး ကြိမ်းမောင်းရိုက်နှက်ခဲ့သော အမျိုးသမီး(၂)ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အမှုဖွင့်အရေးယူ
တရားခံဖမ်းဆီးစဉ် အော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီး ကြိမ်းမောင်းရိုက်နှက်ခဲ့သော အမျိုးသမီး(၂)ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အမှုဖွင့်အရေးယူ
Apann Pyay 6:00 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ပိုင်းက ပုသိမ်-ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင်သို့ ဖြတ်သန်းသွားလာ သောကြိုးတံတားပေါ်တွင် လုယက်မှုကျုးလွန်ခဲ့သော တရားခံ .(၁) ဦးအား ပုသိမ်မြို့မ ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် လှသိန်းနှင့် နယ်ထိန်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသောတရားခံ ထက်မြက်အောင်မှာ ပုသိမ်မြို့၊ အမှတ်(၆) ရက်ကွက်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး မြို့နယ် လ၀က ရုံးတွင် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လာရောက်ပြုလုပ်စဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များမှ သတင်းအရလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး တရားခံအား ဖမ်းဆီးစဉ် တရားခံ၏ မိခင်နှင့် အဒေါ် ဖြစ်သူတို့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အော်ဟစ်ဆဲဆိုရိုက်နှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပုသိမ်မြို့ ကြိုးတံတားပေါ်တွင် လူယက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ များမှ ထက်မြက်အောင်အပါအ၀င်(၆) ဦးဖြစ်သော်လည်း အခင်း ဖြစ်ပွား ပြီးချိန်တွင် တရားခံ(၂)ဦးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် လွတ်မြောက်နေသော တရားခံ(၄) ဦးအနက်မှ (၁) ဦးအား ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လူယက်မှုကျုးလွန်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ တရားခံ ထက်မြက်အောင်အား ပုသိမ်မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ) ၁၇၈/၁၇၊ ပုဒ်မ ၃၉၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တရားခံ ဖမ်းဆီးစဉ် အော်ဟစ်ဆဲဆိုရိုက်နှက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သော တရားခံ ၏ မိခင်နှင့် အဒေါ်ဖြစ်သူတို့အား ပုသိမ်မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ) ၂၆၀/၁၇၊ ပုဒ်မ ၃၃၂/၃၅၃/၂၉၄/၅၀၆/၃၂၃ တို့နဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီတိုင်းမ်
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ပုသိမျမွို့တှငျ ၂၀၁၇ ခုနှဈ ဇှနျလ ပိုငျးက ပုသိမျ-ခြောငျးသာ၊ ငှဆေောငျသို့ ဖွတျသနျးသှားလာ သောကွိုးတံတားပျေါတှငျ လုယကျမှုကြုးလှနျခဲ့သော တရားခံ .(၁) ဦးအား ပုသိမျမွို့မ ရဲစခနျးမှ ဒုရဲအုပျ လှသိနျးနှငျ့ နယျထိနျး တပျဖှဲ့ဝငျမြားမှ ယနေ့ နလေ့ညျပိုငျးတှငျ သကျသမြေားနှငျ့အတူ သှားရောကျဖမျးဆီး နိုငျခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
ဖမျးဆီးရမိသောတရားခံ ထကျမွကျအောငျမှာ ပုသိမျမွို့၊ အမှတျ(၆) ရကျကှကျတှငျနထေိုငျသူဖွဈပွီး မွို့နယျ လဝက ရုံးတှငျ နိုငျငံသားမှတျပုံတငျလာရောကျပွုလုပျစဉျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ မြားမှ သတငျးအရလာရောကျဖမျးဆီးခဲ့ခွငျး ဖွဈပွီး တရားခံအား ဖမျးဆီးစဉျ တရားခံ၏ မိခငျနှငျ့ အဒျေါ ဖွဈသူတို့မှ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားအား အျောဟဈဆဲဆိုရိုကျနှကျခွငျးမြား ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ပုသိမျမွို့ ကွိုးတံတားပျေါတှငျ လူယကျမှုကြူးလှနျခဲ့သူ မြားမှ ထကျမွကျအောငျအပါအဝငျ(၆) ဦးဖွဈသျောလညျး အခငျး ဖွဈပှား ပွီးခြိနျတှငျ တရားခံ(၂)ဦးဖမျးဆီးနိုငျခဲ့ပွီး ယနတှေ့ငျ လှတျမွောကျနသေော တရားခံ(၄) ဦးအနကျမှ (၁) ဦးအား ထပျမံဖမျးဆီးရမိခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
လူယကျမှုကြုးလှနျပွီး ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနသေူ တရားခံ ထကျမွကျအောငျအား ပုသိမျမွို့မရဲစခနျးမှ (ပ) ၁၇၈/၁၇၊ ပုဒျမ ၃၉၅ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး တရားခံ ဖမျးဆီးစဉျ အျောဟဈဆဲဆိုရိုကျနှကျမှုမြားပွုလုပျခဲ့သော တရားခံ ၏ မိခငျနှငျ့ အဒျေါဖွဈသူတို့အား ပုသိမျမွို့မရဲစခနျးမှ (ပ) ၂၆၀/၁၇၊ ပုဒျမ ၃၃၂/၃၅၃/၂၉၄/၅၀၆/၃၂၃ တို့နဲ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူ ဆောငျရှကျထားကွောငျး သိရှိရသညျ။
ဓာတျပုံ - ဧရာဝတီတိုငျးမျ